Talaabooyinka Ka Horeeya Website Wanaagsan | Somali Web Designers
Home » Falsan Web Studio » Talaabooyinka Ka Horeeya Website Wanaagsan
Sadex talaabo oo muhim ah ayaa ka horaysa intaadan yeelan website shaqaynaya waana talaabooyin daruuri ah ama shardi.
1) inaad diiwaan galiso magaca aad doonayso inuu ciwaan u noqdo sitekaaga, inta badan dadku waxay jecelyihiin in uu ku dhamaado .com waana sida wanaagsan hadii ayan ujeedadaadu ahayn urur ama xarun tacliin taa ooy suuragal tahay inaad ku dhamayso .org ama wax la mida. Shirkado badan ayaa diiwaan galiya magacyada waxaase ugu wanaagsan sharikada la yiraa godaddy.com.
2) Talaabada xigta taa waa inaad hesho halkii uu sitekaagu ku hoyan lahaa ama uu dagi lahaa taasoo loo yaqaan hosting. Waxaa ugu roon oo aan anigu in badan la macaamilay hostgator oon filayo inay hogaamiyaan dhinacaa.
3) Talaabada ugu dambaysa waa inaad hesho cidii kuu falkin lahayd websiteka aad doonayso sida aad u doonayso waana halka ay sharikadan Falsan Web Studio u buuxisay umadeena si kalsooni, aqoon iyo qiima jaban ba ay ku dheehantahay. Waxaa intaa kuu dheer inaga oo kuugu adeegayna afkaaga hooyo, kula garab taagan caawimaad joogta ah iyo waliba hawla dheeri ah sida inaan kaa kaafino talaabooyinka sare oo dhamaan hawlaha aan kuu fududayno.
Hamoogaan Falsan hadii ay kugu soo dhacdo inaad yeelato website.
Waxaa isku duway : Maamulka Falsan.
Dhiso Website Ku Cajibiya
Booqo : http://www.falsan.com
nagala soo xiriir : info@falsan.com